Sidee Nipsey Hussle u waxyoonay kumanaan qof oo Eritrean ah - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Sidee Nipsey Hussle u waxyoonay kumanaan reer Eritrean ah - dad
Sidee Nipsey Hussle u waxyoonay kumanaan reer Eritrean ah - dad
By Master Master Gaarka ah ee loo diro Washington Post
Waxaan ku fadhiistay dusha diyaarada ilmada indhahayga, eegay telefankayga fariimaha aan ku seegay markii aan ku jiray hawada ugu dambeyntii la geeyay. Kadib waxaan eegay maaliyada baseball-ka ee Eritrea ee aan xiranayay, dhammaystiran.
Nipsey Hussle wuu dhintay.
Waxa uu si weyn loo yaqaan byproduct ah Crenshaw, degmada koonfureed ee Los Angeles, iyada oo uu xiriir gaang, ay walax lyrical iyo dadaalka bulshada ay. Laakiin halka LA iyo dadyowga weyn ee hip-hop ay ku barooranayaan geerida naxdinta leh - Hussle ayaa lagu dilay dukaankiisa, Marathon Clothing, marinka 31 - bulshada Eriteriya ayaa sidoo kale murugo ka muujisay dhimashada walaalkeen.
Los Angeles, CA - April 01: Dadka kicin calanka Eritrea oo lagu sharfayo heesaa dalka Nipsey Hussle 33 ka sano jir ah, markii ay soo ururiyaan si ay u barooran 1er ee April 2019 Los Angeles, California. Farshaxankii Grammy-magacaabay ayaa la toogtay maalin cad waxaa laba maalmood ka hor Marathon ee dukaanka The Dharka uu aasaasay 2017 maalintii uu waday inuu la kulmo madaxa booliska Los Angeles si ay ugala hadlaan siyaabo of joojiyaan rabshadaha baandooyinka. (Sawirka David McNew / Sawirada Gawaarida)
Tani waa sababta oo heesaa ku magacaaban Grammy sidoo kale waa byproduct ka mid ah Eritrea, dal yar ee East Africa leh oo ku saabsan 5 million. Hussle, ku dhashay Ermias Asghedom ayaa lala xiriirinayay in ay Eritrea aabbihiis, Asghedom Dawit, kuwaas oo ku qaatay sano uu hore 20 oo sheegay sheekada wiilkiisa by.
LABAGEEDI by Itoobiya Emperor Haile Selassie in 1962, Eritrea qaatay saddexda sano ee soo socda u dagaalamayaan ay xorriyadda. Inkasta oo Itoobiya ka heshay taageero ee Maraykanka, Midowga Soofiyeeti iyo Israa'iil, Eritrea ku guulaystay in 1991. Tani guul baaxad weyn ayaa weli calaamad sharaf for Eritrea, Waxyoon maskaxda ka mid ah is-tiirsanaanta iyo adkeysiga u waxyoonay Hussle.  "In -Arday iyo iyagoo ka gees ah Kooxahan ka ah guul iyo ahaan isku filan ka dib markii xaqiiqda ah oo madax-bannaan ee dalka a in uu aaminsan yahay in isku-filnaanshaha iyo dhismaha ka xoq," ayuu Hussle ku sheegay wareysi uu la Ceerii-TV sanadkii la soo dhaafay, xarig ah telefishanka dawladda Eritrea. "Waa la mid ah waxa aan u taagannahay in music by qaadayaan tallaabooyin iyo samaynta safarkii dheeraa ee ku salaysan daacadnimadayda, is-tiirsanaanta iyo Ogaanshaha sida in ay qaataan waraaqaha lagu curyaaminkaraa. Cadaadinta iyada oo loo marayo nidaamka sawir weyn. Anigu waxaan ku faanayaa, sharafsanahay, iyo in yar yaa waajib ku ah in ay ixtiraamaan daacadnimada isku midka ah. "
Hussle ayaa safarkiisii ​​ugu horeeyay ee Eritrea ku tagay 2004, halkaas oo uu ku sugnaa muddo seddex bilood ah, ka dibna halkaas ayuu ku noqday sannadkii hore. sii deynta abaalmarinta "Grugy" oo lagu magacaabo "Victory Lap". Wuxuu safarkiisii ​​ugu horeeyay ku tilmaamay sheeko naxdin leh oo sharaf leh oo khibrad u leh Eritrea oo ku saabsan shakhsiyaadka raadiyaha iyo in dalkan dalkan la siiyo fursad aan horay loo arag. 19659003] "Wax badan oo aan ahay, waxaan ogaaday markii aan maray [Eritrea]," ayuu Hussle sheegay in sanadkii hore ee Hot 97 ee "Ebro In Morning". "Yaan u maleynayaa inuu dabiici ahaan ahaa, qayb ka mid ah shakhsigeyga iyo waxa aan xiiseynayey waxay la xidhiidhaa aabahayga. "
Hantidhawrka Asmarka ah, Hussle wuxuu noqday jaaliyadeena. Waxa uu ahaa wajiga waddan aan la arki karin oo leh wakiillo aan yarayn ee warbaahinta guud ee Maraykanka - wuxuu ku sii jirayaa hooskii Ethiopia sababtoo ah dhaqanka iyo caadooyinka la midka ah ee dalkan. Waxay ahayd unug isku xiran oo saameeyey dhammaan qaybaha hoose ee Eritrean ee Mareykanka: bay'ad ahaan saamayn ku leh ganacsatada bulshada oo isku dayaya in ay hagaajiyaan bulshadooda iyo farshaxanno doonaya in la maqlo.
Wuxuu isticmaalaa isbarbardhigga marathon, taam ah. si ay u noqoto waddan la mid ah xiddigaha masaafada adduunka, miyuusigga iyo calaamada dharka, si ay u muujiyaan kobcintooda sida hogaamiye madaxbannaan, ganacsade iyo bini'aadannimo sannadihii la soo dhaafay ee 14. Wuxuu u adeegay sidii heeso qurux badan oo qurba-joog ah oo ay uga carareen safarka khatarta ah ee waalidkiis inuu u guuro Mareykanka, isagoo isku dayaya in uu xaqiijiyo in tani ayan waxba u dhimanayn. Wuxuu naga dhigay inaan rumaysanno inaan ka guuri karno guryaha dakhligoodu hooseeyo isla markaana ku guuleysto dhaqaale aan caadi ahayn oo dhaqaale oo badanaaba abaal marinaya shaqada anshaxa.
"Wuxuu nagu dhiirrigeliyay dhamaanteen," ayuu yiri Nat Berhe, oo madax ka ah NFL, oo ​​ah nin Mareykan ah. oo ku soo koray koonfurta California. "Waxaan bilaabay dhageysiga Nipsey markii aan jaamacada ku jiray. Taas oo kali ah igu dhiirrigelisay inaan dhammeeyo kuleejka. Waan ku dhaawacayaa taas. Waxaan u maleynayaa in uu si aad ah ula socdo beesha caalamka. "
Inkasta oo in badan oo naga mid ah ay dalkan ku yimaadaan faqriga iyo waxbarashad la'aanteed - iyaga oo kaliya haysta fiisooyinkooda, sharafkeena iyo naxdigeena - Hussle ayaa na soo dhaweeyay.
Marka atariishada American iyo comedienne ka soo jeedo Eritrea, Tiffany Haddish, oo sidoo kale ku koray ee Los Angeles, oo xiran dharka a zuria Eritrean ah rooga cas ee Oscar ee sanadkii la soo dhaafay in aabbihiis Eritrea maamuuso , oo dhawaan la dilay, ayaa waydiiyay Hussle wax ku saabsan ficilkiisa.
"Waan ku faani jiray, waana dhiirrigeliyay," ayuu yiri Hussle. "Waxaan u maleynayay in ay tahay daroogo, waxayna sheekadan sheekadan sheekadan ka sheekeysay waxayna ku faantay meesha ay ka timid. Waddankayagu waa dal yaryar, waana arrin aan mugdi ku jirin dunida oo dhan, waa wax waalan inuu arko qof ka mida moobiilkan hoos u dhacaya. Waxaan dareemayaa inaan ka ciyaarayo qayb ka mid ah, sida qof kasta oo kale. Waa sheeko dhab ah oo awood leh, oo ah waddankeena, iyo dadkeennu waxay leeyihiin dhaqamo gooni ah, marka, marka aynu ogaanno, waxay ansixiyaan. Waan ku salaamayaa iyada iyo aniga waxaan leeyahay jacayl iyo ixtiraam badan. "
Hussle iyo Haddish ayaa lagu sharfi doonaa xagaaga oo ay weheliyaan Berhe-ka oo ah sannad-weynaha Eritrea ee sannad-maaliyadeedka Washington, halkaas oo ay ku nool yihiin bulshada ugu badan ee Eritrea ee ku nool Mareykanka.
"Waxaan dareemay sidii aan ula joogay Malcolm X," Berhe ayaa ka yiri in la wadaago marxaladda Hussle. "Waxaad u maleyneysay inuu yahay qof aad u muhiim ah, sida haddii uu soo muuqday. Waxay ahayd mid cajiib ah. "
Markaan ka fikiro Hussle, waxaan xusuustaa tartanka kubadda cagta ee 2016 ee Atlanta, halkaas oo uu ka qabtay munaasabadda Medusa Lounge. Qolka waa la xirxiray, qof walbana wuu qallajiyey dhididkiis, sababtoo ah hawo qaboojiyaha ayaa jebiyay habeenkii jilicsanaa, laakiin wali waxaan ku dhufannay isaga oo dhan.
Waan xasuustaa markaan soo galay suunka si aan ugu dambeyn ula kulmo saaxiib. NBA-da All-Star Game waxaa lagu qabtay Hussle, waxaana si lama filaan ah u garwaaqsaday in mar uun, ma ahayn Eritera kaliya ee qolka. Waan xasuustaa in wejigiisu iftiimay markii aan u sheegey inaan ahay Eriteriya waxaanan muujiyay sida aan ugu mahad celiyay isaga oo matalaya.
Waxaan xasuusan doonaa in uu dhab ahaantii shakhsiyadeeyey asal ahaan Eritrea asal ahaan iyo asalkiisa. waxay soo ururiyeen beesheena usbuucii hore, iyada oo in ka badan Xigga Xigga ah oo lagu abaabulay aduunka oo dhan (qaar ka mid ah caawinta Itoobiyaanka, kuwaas oo sidoo kale la il daran khasaaraha).
Oo waxaan qabaa ku saabsan waalidka iyo inta ay jecel yihiin music ee Fanaanada Eritrea Yemane Barya, kuwaas oo la wadaago Eritrea aragnimo arxan lagu jiro ay halganka xorriyadda. Waxa loo yaqaan Abo dikha, oo ah "aabaha saboolka ah," Barya wuxuu ahaa codka jiilka waalidkiis, isaga oo farriinta siyaasadeed ugu heesay heesaha jacaylka (kii ugu horreeyey ee keenay isaga xabsi). Barya si kedis ah ku geeriyooday 1997. Wuxuu 48 sano.
Hussle wuxuu ahaa Barya. Wuxuu ku geeriyooday sanado 33, isaga oo ka tagaya god weyn oo beesheena aan la beddeli doonin. Laakiin waan sii wadi doonaa maaradoonka. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan caruurteena kala hadli doonaa Abo Dikha.
Tesfatsion wuxuu daboolay Washington Redskins ee Washington Post. Wuxuu ka tagay Post on December 2017. Wuxuu horey u soo gudbiyey Vikings Minnesota loogu talagalay Star Tribune mudo laba xilli ah ka hor inta uusan ku biirin Post on 2015.
Dhagarbarka Brunei: mudaaharaad ka socota magaalada London ee hore ee hudheelka
Dad: Kodak Black ayaa ka dhalatay muran uu la yeeshay ereyadiisii ​​qaloocnayd ee uu u geeriyooday arooska Nipsey Hussle